VaEmmerson Mnangagwa naVaJonathan Moyo
Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti hapana chakaipa nekusarudzwa kwekomiti yebato reZanu PF ichatungamira mukutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo, sezvo izvi zvagara zvichiitwa mubato iri makore ose anenge nyika yatarisana nesarudzo.
Svondo rapera, mutungamiri weZanu PF, VaRobert Mugabe, vakadoma vakuru vebato ravo vashanu kuti vatungamire gadziriro yesarudzo pamwe nekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dziri kuitwa gore rinouya.
Asi vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vari kushoropodza danho iri vachiti harina zvikuru zvarinogona kushandura kana bato iri risina kubatana.
Asi mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute, Doctor Pedzisai Ruhanya, vanoti vanhu havafanirwe kunyanya kutarisisa kunyaya dzezvimapoka zviri muZanu PF sezvo zvisineyi nekuumbwa kwekomiti iyi.
VaMugabe vakadoma komiti ine vanhu vashanu vanoti mudzimai wavo, Amai Grace Mugabe, murongi wemisangano yezvematongerwo enyika, VaSavior Kasukuwere, murongi wemabasa, VaIngatius Chombo, mukuru wevechidiki, VaKudzai Chipanga, pamwe nemunyori anoona nezvemutemo, VaPatrick Chinamasa.
Komiti iyi ine mamwe makomiti maduku mashanu ari pasi payo anotungamirwa naVaKasukuwere, VaMuzvinafundo Jonathan Moyo, VaObert Mpofu, Vakembo Mohadi, pamwe naVaChinamasa.
Asi vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti komiti iyi haina zvinoburitsa nekuti yakawanda vanhu vanonzi vakarerekera kuchipoka chinozivikanwa nerekuti G40, icho chinonzi chiri kutsigira gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika, VaSydney Sekeramayi.
Chipoka ichi chinonzi chiri kupikisana nechinonzi Lacoste, icho chinonzi chinotsigira mumwe wevatevedzeri vemutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa.
Doctor Ruhanya vanotiwo kunetsana kuri kuitika mubato rinopikisa reMDC-T hakufanirwe kuonekwawo sekukundikana kwebato iri kugadzirira sarudzo, sezvo mubatanidzwa warakapinda weMDC Alliance, uri kushanda zvakasimba kugadzirirawo kutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo.
MuMDC-T mune kunetsana pakati pemutungamiri webato, VaMorgan Tsvangirai, nemutevedzeri wavo, Muzvare Thokozani Khupe, nevamwe, avo vari kupokana nedanho rekuumba mubatanidzwa uyu.
Hurukuro naVa Pedzisai Ruhanya